Ezigbo Ugwu - PetrPikora.com
Nnukwu Ugwu (German Riesengebirge, Polish Karkonosze) bụ ọnụ ọgụgụ geomorphological na ugwu kachasị elu na Czech na Highlands. Ọ dị n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ Bohemia (nke dị n'ebe ọdịda anyanwụ dị n'akụkụ Liberec, nke dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Královéhradecký) na n'ebe ndịda nke akụkụ Polish nke Silesia. Ugwu kachasị elu n'ugwu Giant bụ Sněžka (1603 m). Dị ka asịrị, Krkonoše Mountains na-eche echiche mythical Krakonos spirit. Ọ bụ otu n'ime ebe ugwu kachasị mma na Czech Republic.
Wider ugwu gụnyere Giant ama ugbu a na n'oge ochie kọwara dị ka Sudetenland, nke bụ ma eleghị anya aha Celtic si (kasị asụgharịkarị ugwu boar) ma ọ bụ Balkan si (sụgharịrị dị ka Ewu Mountain). Ptolemy (banyere 85-165) eji maka taa Sudetenland aha Sudetayle (na ore Mountains) na Askiburgion (karịsịa Mountains, nke dị nso n'obodo Askiburgium imebisị, ikekwe ka Lusatian Mountains, gụnyere Giant Mountains). Dio Cassius na 3. na narị afọ na-eji aha maka vandal Askiburgion n'ugwu. Mgbe Ptolemaic map bịara Czech Republic Bohuslav Balbin na Pavel rock si n'elu eji ndọtị aha Sudetenland dum gbalaga (17. Century).
A na-akpọ ugwu Ugwu nke Krkonose ka ọhịa ọhịa Bohemia na akwụkwọ edemede Russian nke 1095, na Snowy Pulkava na 1380 ka a na-akpọ Ugwu Ugwu.
Giant Mountains aha na mbụ kwuru na ma taa elu Kolo na ji esi mmiri ọkụ ma ọ bụ Kokrháč. Marking Giant Mountains (erikwa nwanyị ", na" Giant Mountains) na riiji-egosi na 1492 na ndekọ nke nkewa Štěpanice ala na ụlọ na Wallenstein na Jilemnický akụkụ na 1499 mgbe n'omume Vladislav II., The kasị ochie ndụ map nke na aha na-arụ ọrụ Nicholas Klaudyán na 1518. Wenceslaus Hajek ya akukonsinooge nke 1541 eji aha Czech na Silesian Giant Ugwu.
The mbụ àmà nke ndọtị nke aha ugwu ahụ dum bụ site 1517 mgbe aha bụ Krkonošské ugwu, Giant Mountains e dere zuo ezu ekwensu ọgụgụ. Edere aha aha nke Giant Mountains nke mbụ na 1601. The aha esiwak-atụle ga-a emepụta nke ochie Slavic isi "n'olu" ma ọ bụ "esi", nke pụtara Dwarf pine ma ọ bụ ugwu pines, Josef Jungmann e jikọtara ya na aha Germany ma ọ bụ Celtic ebo Corconti ma ọ bụ Korkontoi, kwuru okwu ya site Ptolemy, na ọtụtụ ndị chere na ọ kpọrọ aha ugwu Asciburgius bụ yiri Oké Osimiri Ukwu nke taa (Korkontoi kwesịrị ibi n'ebe dị nso na isi iyi nke Vistula, ma ọ bụ karịa n'ugwu Beskydy). Nnyocha ụfọdụ akọwa malite aha nke Proto ndabere, nke pụtara "nkume mkpọda, nkume ubi" na-atụ aro a njikọ na aha nke Ukrainian Gorgany ugwu na Eastern Carpathians.
German Ẹkot (Czech na Silesian akụkụ ugwu ahụ nke bụ ruo mgbe 1945 mmadụ bi ọgụgụ ka ukwuu nke ndị Germany) na pụtara Giant Mountains (Riesengebirge, Giant Mountains na English) na-abịa site aha Risenberg, nke Agricola (Georgius?) Na 1546 akara ke ndaeyo. Otutu Riesengebirge maka ugwu ahụ dum nọkwa mbụ e dere na afọ 1571.
Ndabere nke mejupụtara ihe banyere ala na-ejuputa elu nke elu nkume ma ọ bụ nkume ndị dị na nkume mbụ (mgbachi). N'ebe ọwụwa anyanwụ nke ugwu ugwu ahụ, ala ala anaghị adịkarị. Okpomọkụ crystallinic oge ochie abanye n'ime ebe ụfọdụ na Krkonoše-Jizerský pluton (granite). Mmiri ndị na-egbuke egbuke nke ebe ndị ahụ na-ekpo ọkụ bụ ndị na-egbukepụ egbukepụ nke na-egosipụta ala ime obodo. E nwere ụdị abụọ glaciers. Nke mbụ bụ ndagwurugwu-ụdị glaciers na nke abụọ bụ ụdị Scandinavian. Ugwu miri emi (obosara Ekwensu, wdg) na-ekpuchi ya site na ya. Maka echiche ka mma, anyị nwere ike ilele iceba na Scandinavia nke na-egosi otú ọ dị Giant Mountains nwere ike ile anya. Ihe nlereanya kachasị mma nke ọrụ glacial bụ, dịka ọmụmaatụ, Elbe Mine ma ọ bụ Giant Mine, nke bụ ndagwurugwu nke glaciers kpatara. Ndị ọzọ na-ekpo ọkụ glacial bụ ndị na-ekpuchi ọkụ (v Giant Mountains ọ maara karyas dị ka "olulu"). Ekwuru okwu nke ọma bụ olulu mmiri ọkụ na olulu snow na Poland. Kary bụ otu n'ime ihe ndị dị oké ọnụ ahịa anyị nwere ike ime Giant Mountains n'ihi na ha bụ ugwu kachasị oke nke Oké Osimiri Ukwu. Ọrụ mkpuchi v Giant Mountains ọ dị mkpa ịkpọtụrụ, dịka ọmụmaatụ, oké nkume oké nkume (ugwu dị elu) ma ọ bụ ụlọ ndina oyi.
N'elu ókèala ugwu ukwu dị iche iche, e nwere ihe ndị dị ndụ na ụdị anụ ọhịa na anụmanụ. V Giant Mountains bụ ebe kachasị elu karịa oke oke ọhịa na Czech Republic. Mgbe elu 1200-1300 m eriri ọhịa ahụ na-akwụsị ebe a. N'elu bụ ebe ala ọma jijiji ahụ, onye agha, nkume ahụ na oké osimiri ahụ. A na-akpọ biotope a na-ahụkarị arc-alpine tundra. N'ebe ụfọdụ, anyị na-ahụkwa peat bogs. A na-ebibi akụkụ nke mbụ ahụ site na mmetụta nke ntinye. N'akpuru ala, beech na spruce monocultures na eto. Na Malacofauna nke Ugwu Ukwu ahu nwere 90 umu mollusc.
Na ókèala nke Giant Mountains na nsogbu Giant Mountains National Park (KRNAP) ebe nke 36 400 ha, bụ onye e kwuru na afọ 1963, na Karkonoski Park Narodowy (KPN), tọrọ ntọala na 1959. Mpaghara nchekwa nke ogige ntụrụndụ nwere ọtụtụ 18 400 ha na Czech n'akụkụ. Mountains nwekwara ebe 1992 bilateral Biosphere Reserve kwusara site na United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (nke ebe Czech nke 54 800 ha). E kewara KRNAP n'ime I., II. na III. oghere nchedo, ebe ebe mbu nke abuo kachasi ihe bara uru na usoro nchedo kachasi anya. Nke a pụtara, dịka ọmụmaatụ, jikoro ebe n'ime I. na II. A machibidoro mpaghara ka ịkwaga n'èzí mara njem nleta na usoro skiing. A na-amarakwa ebe ugwu Krkonoše dị ka ebe nnụnụ na nnukwu nnụnụ na-ekpuchi akụkụ dum nke ebe nchekwa biosphere, n'otu n'otu. ogige mba gụnyere mpaghara nchekwa.
Oké Ugwu ahụ si n'ebe ihu igwe na-ele ugwu ugwu kachasị elu na Czech Republic. Enwere ike iji tụnyere ọnụ ala ndị na-ede n'elu ebe mpempe 1400 m na Green Coast. Okpomọkụ dị iche na nke elu. Ka ihe atụ, ná nkezi, okpomọkụ na Trutnov bụ 6,8 degrees Celsius, mgbe on Sněžka, nke bụ coldest ebe nke Giant Mountains, nkezi afọ okpomọkụ 0,2 degrees Celsius. N'otu oge ahụ, ọ bụ ebe oyi kasị dịrị na Czech Republic. Ọnụ mmiri ozuzo dị na Oké Osimiri Ukwu na-adabere n'ọdịda elu na ndagwurugwu. Mara eziokwu bụ na ebe ke West Giant n'oge afọ nwere ihe mmiri ozuzo karịa ebe dị n'ebe ọwụwa anyanwụ n'ugwu, dị ka na Czech Republic adịkwaghị Western ikuku eruba. Kasị ọdịda dara ke ndaeyo ọnwa n'oge oké ifufe na mmiri ozuzo na-erughị na March, ma n'ihi na nnukwu ego nke snow na ọ bụ obere kwesiri ngosi. Ọ bụ ezie na Giant kasị elu ugwu na Czech Republic na-ahụ ihe ndị kasị ọdịda adịghị ada, n'ihi na Giant tọgbọ na mmiri ozuzo onyinyo nke Jizera Ugwu. Na ridges esịmde mmiri ozuzo averages gburugburu 1300 mm / afọ, mgbe na ndagwurugwu ọ pụrụ ịbụ ruo 1500 mm / afọ. Akụkụ ọzọ nke ọdịda bụ ezigbo snow, nke bụ akụkụ dị mkpa nke Oké Osimiri Ukwu. Ná nkezi, ụbọchị nke mbụ snowfall na Krkonoše Ugwu enweghị ike ikwu n'ihi na ọ nwere ike snow na ridges fọrọ nke nta niile n'afọ gburugburu. Okpukpu uhie na-adịgide adịgide dị n'ogologo na etiti November ruo May. Mmiri snow kachasị ukwuu na-apụta na mkpọda ugwu (Map nke mba ebe snow ruru ruo 15 mita!). Ọtụtụ mgbe, n'ugwu ukwu ahụ, oké ifufe na-efe (ifufe nke kachasị elu nke a tụrụ na Sněžka 216 km / h).